Umbhalo: IATA CEO yenza isibheno kuRhulumente noShishino ukuba babeke abakhweli phambili
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Umbhalo: IATA CEO yenza isibheno kuRhulumente noShishino ukuba babeke abakhweli phambili
Airlines • isikhululo • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Utyalo mali • iindaba • abantu • Iindaba zasePoland • Technology • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Oktobha 15, 2019
UAlexandre de Juniac, uMlawuli-Jikelele we-IATA kunye ne-CEO
The Umbutho wamazwe ngamazwe oThutho loMoya (IATAUcele oorhulumente kunye nomzi mveliso ukuba basebenzisane ukuze basebenzise ezobuchwephesha bale mihla ukubeka umkhweli embindini wohambo kunye nokufezekisa ukusebenza ngokukuko kwiziseko zophuhliso.
Umnxeba weza ngexesha lokuvula kuka-Alexandre de Juniac, uMlawuli-Jikelele we-IATA kunye ne-CEO, kwisikhululo senqwelomoya i-IATA Global kunye ne-Passenger Symposium (GAPS) eWarsaw.
Umbhalo wentetho ka-Alexandre de Juniac
Molweni manene nani manene, kumnandi ukuba nani.
Isikhululo seenqwelomoya seHlabathi liphela kunye neNtlanganiso yabaHambi sisiganeko esibalulekileyo kwikhalenda ye-IATA. Ngomxholo woKwakha amandla eKamva, kwiintsuku ezimbalwa ezizayo, uya kuba nezinto ezininzi ezibalulekileyo kwi-ajenda yakho.
Enkosi kubahlobo bethu kwiiLOT Polish Airlines ngobubele babo njengabamkeli ziindwendwe. Kwaye uninzi lwabaxhasi abathe basebenzisana nathi ukwenza lo msitho ubekhona.
La ngamaxesha anomdla kushishino lothutho lomoya lwehlabathi. Siphantsi koxinzelelo oluvela kumacala amaninzi.
Ngo-Septemba kuphela, iinqwelomoya ezine zase-Yuropu zagungqa Uxinzelelo olubangelwe yile nto kubasebenzi nakubakhweli lucacile. Oku kubonisa indlela ekunzima ngayo ukuqhuba inqwelomoya-ngakumbi eYurophu, apho iindleko zeziseko kunye neerhafu ziphezulu.
Ukungavisisani kwezorhwebo kuthabatha umthwalo wazo kwicala lezinto zeshishini. Khange silubone ukukhula kwiinyanga ezili-10. Ngapha koko, imiqulu ngoku ilanda malunga neepesenti ezi-4 ngezantsi konyaka ophelileyo.
Imikhosi yezopolitiko iye yaqikelela ngakumbi kunesiqhelo-neziphumo ezizizo kwishishini lethu. Uhlaselo lwamva nje lwezixhobo zeoyile zaseSaudi lusikhumbuza ukuba sesichengeni sokutshintsha ngokukhawuleza kwixabiso leoyile.
U-Andrew Matters, uSekela-Ntloko wezoQoqosho wethu uzakukhanyisa ngakumbi ngale micimbi kwintetho yakhe. Kodwa bendifuna ukuqala intetho yam ngesikhumbuzo esifutshane sokuba sikumaxesha anzima. Kwaye ezi zibonelela ngemixholo ebalulekileyo kwiingxoxo zakho ekwakheni ikamva-ukuguqula izikhululo zeenqwelo moya, ukwenza okuninzi kwezakhono zedijithali kunye nokwenza uhambo olungenamthungo kwinani elikhulayo labahambi.
Imiceli mngeni ayikhawulelwanga kwindlela yezoqoqosho. Indibano yeHlabathi yoMbutho wezoPhapho lwaBantu (i-ICAO) iphele ekuqaleni kwale nyanga. Kwaye eyona nto iphambili kwi-ajenda yamazwe angamalungu angama-193 yayikukwakha ikamva eliqinisekileyo lokuhamba ngenqwelomoya.
Ukuhamba ngenqwelomoya kuyanzima ngozinzo kwindalo esingqongileyo. Kudala siyibona njengeyona nto iphambili kwilayisensi yethu yokukhulisa nokusasaza izibonelelo zonxibelelwano lwehlabathi, izibonelelo ezinxulunyaniswe ne-15 kwiinjongo ezili-17 zoPhuhliso oluZinzileyo lwe-UN.
Kude kudala phambi koqhankqalazo lwemozulu lwalo nyaka, ishishini lethu belisebenza ukunciphisa ifuthe lalo kutshintsho lwemozulu. Kwisithuba seminyaka elishumi, besinenjongo yokufaka izinto ezikhutshwayo ukusukela ngo-2020. Kwaye ngo-2050 sifuna ukusika i-carbon footprint yethu sibuyele kumgangatho wama-2005.
Indibano ye-ICAO iphinde yaqinisekisa ukuzibophelela kwayo kwisivumelwano seCarbon Offsetting and Reduction Scheme sesivumelwano sezoPhapho lwaMazwe ngaMazwe (CORSIA), esiya kusinceda ukuba sifezekise ukukhula okungathathi cala kwekhabhoni ukusuka ngo-2020.
Ngoku sisebenza ukwenza imephu yendlela yethu eya kwiinjongo ezingamabhongo ezingama-2050. Kwaye isiphumo esibalulekileyo esivela kwiNdibano kukuba i-ICAO ngoku izakuqala ukujonga injongo yexesha elide yomnqweno wokunciphisa ukukhutshwa-ke oorhulumente kunye nomzi mveliso baya kulungelelaniswa.
Inkqubela phambili sele yenziwe. Izinto ezikhutshwayo kuhambo oluphakathi sisiqingatha sento ababeyiyo ngo-1990. Inkqubela phambili esiyenzayo kumafutha ohambo ngenqwelo-moya azinzileyo kungenzeka ukuba ngawona mathuba ethu okuphungula ukukhutshwa kwezinto ezikhutshwayo. Ngaphezulu komjikelo wobomi babo, banokubanako ukunciphisa i-carbon carbon footprint ukuya kuthi ga kwi-80%.
Kufuneka sidibanise ezi nzame zibalulekileyo nonxibelelwano olusebenzayo. Abantu banenkxalabo malunga notshintsho lwemozulu-kunjalo. Kwaye kufuneka bayazi into eyenziwa lushishino lwethu. Ke, siza kuqinisa iinzame zethu zonxibelelwano ukuze sikwazi ukubamba incoko enentsingiselo ngakumbi nabahambi, abathathi-nxaxheba kunye noorhulumente.
Umzi mveliso wethu uza kuqhubeka ukujongana nemiceli mingeni kwezoqoqosho nakwezokusingqongileyo. Kwaye siya kuzoyisa kuba sinenjongo ebalulekileyo-ukudibanisa abantu kunye namashishini kunye. Kudala ndibiza ngenqwelomoya ishishini lenkululeko kuba likhulula abantu ukuba benze izinto ezingenakwenzeka.
Baninzi abantu, ngakumbi kwilizwe elisaphuhlayo, abafuna ukuthatha inxaxheba kwizibonelelo zokuhamba ngenqwelomoya. Umzi mveliso wethu uyakhula ukuhlangabezana nezi mfuno.
Oku kuzisa ucelomngeni lwayo. Ukwakha amandla exesha elizayo-umxholo wale nkomfa-kuya kufuna inguqu kwisikhululo seenqwelomoya, kwinqwelomoya nakwinqanaba loshishino. Ithatha ukuba:
Ukubeka umkhweli entliziyweni yenkqubo yethu yokwenza izigqibo - kufuneka sibaqonde abathengi bethu ngokwaneleyo ukuze bahlangabezane okanye badlule kulindelo lwabo
Ukuphuhlisa izibonelelo ezinokumelana neemfuno zexesha elizayo-ngaphandle kokuxhomekeka kwizikhululo zeenqwelo moya ezikhula ngakumbi, kwaye
Ukudala abasebenzi bexhotyiswe ngezakhono eziyimfuneko kwikamva
Indlela yokuQala yabahambi
Masiqale ngomkhweli-abathengi bethu. Yintoni abayifunayo kumava abo okuhamba? UPhononongo lwaBakhweli beHlabathi ngo-2019 lusinika imikhondo. Iziphumo ziya kwenziwa kamva kamva. Kodwa eyona nto ibalulekileyo kukuba abagibeli bafuna itekhnoloji yokuphucula amava abo okuhamba. Ngokukodwa, abakhweli bafuna ukusebenzisa ukuchongwa kwebhayometri ukukhawulezisa iinkqubo zokuhamba. Kwaye bafuna ukubanakho ukulandelela imithwalo yabo.
Uphando lufumanise ukuba iipesenti ezingama-70 zabakhweli bazimisele ukwabelana ngolwazi olongezelelweyo malunga neenkcukacha zebhayometri ukukhawulezisa iinkqubo kwisikhululo seenqwelomoya. Oku kunyuka ngokuhambelana nenani leenqwelo moya ezithathwe ngonyaka.
Itekhnoloji ye-Biometric inamandla okuguqula amava abakhweli. Namhlanje, uhambo oluya kwisikhululo seenqwelomoya luhlala luphazamisa. Kuya kufuneka uhambe amanyathelo aphindaphindiweyo, njengokuhambisa amaxwebhu akho okuhamba kwiindawo ezininzi ukuqinisekisa ubungqina bakho. Oku kudla ixesha, kungasebenzi kwaye akulondolozi ixesha elide njengoko izithuthi zikhula.
Inyathelo lesazisi elinye le-IATA linceda ukusitshintshela kumhla apho abakhweli banokonwabela amava esikhululo seenqwelomoya angenaphepha kwaye bahambe ukusuka kumgaqo ukuya kwisango besebenzisa ithokheni enye yokuhamba yobuchwephesha efana nobuso, iminwe okanye ukuskena iris.
Iinqwelo-moya zisebenza ngasemva kweli nyathelo. Amalungu ethu ngamxhelo mnye asamkele isigqibo sokukhawulezisa ukuphunyezwa kwe-ID enye kwi-AGM yethu ngoJuni. Eyona nto iphambili ngoku kukuqinisekisa ukuba kukho imigaqo ekhoyo yokuxhasa umbono wamava okuhamba ngaphandle kwamaphepha aya kuthi aqinisekise ukuba idatha ikhuselwe kakuhle.
Indlela yokuqala 'yabakhweli' ikwathetha ukukhathalela izinto zabo xa beseluhambeni. Abakhweli basixelele ukuba ukubanakho ukulandelela imithwalo yabo ejongiweyo yinto ephambili. Ngaphezulu kwama-50% bathi banokubanakho ukukhangela ibhegi yabo ukuba bayakwazi ukuyilandela kuhambo lonke. Kwaye i-46% ithe bafuna ukubanakho ukulandelela ibhegi yabo kwaye bayise ngqo kwisikhululo seenqwelomoya ukuya kwindawo yabo yokugqibela.
Iinqwelo-moya kunye nezikhululo zeenqwelo moya zikwenza oku ngokuphumeza ukulandela umkhondo kwiindawo eziphambili zohambo njengokulayisha nokukothula (IATA Resolution 753). I-moya ze-IATA zenze isigqibo ngamxhelomnye ukuxhasa ukuhanjiswa kweRadio Frequency Identification (RFID) kwihlabathi lonke ekulandeleleni umthwalo ukuze kuhlangatyezwane nolindelo lwabakhweli. Ukuza kuthi ga ngoku ukumiliselwa kubonwe inkqubela phambili elungileyo, ngakumbi e-China apho itekhnoloji iye yamkelwa kakuhle. EYurophu, uninzi lweenqwelo moya kunye nezikhululo zeenqwelomoya zisebenza ngempumelelo ukungenisa iRFID, ngakumbi iAir France eParis CDG.
Ndithatha eli thuba ukukhumbuza amalungu ethu ukuba ukongeza ekuhlangabezaneni nokulindelweyo ngabathengi bethu, ukuphunyezwa kweRFID kuya kunceda ukunciphisa iindleko ze-USD2.4 yezigidi zezigidi ukuya kwiinqwelomoya ezivela kwiingxowa eziphathwe kakubi. Kwaye izibonelelo azipheleli apho. Iingxowa zokulandela umkhondo ziya kunciphisa ubuqhetseba, zenze ukuba kuxelwe kwangaphambili, zikhawuleze ukulungela inqwelomoya ukuba zihambe kwaye zenze kube lula ukuzenzekelayo kweenkqubo zempahla.
Intsika yesibini yokukhula okuzinzileyo kukuphuhlisa iziseko ezingamelana neemfuno zexesha elizayo. Asizukukwazi ukujongana nokukhula okanye ukutshintsha okulindelweyo kwabaxhasi ngeenkqubo zethu zangoku, izibonelelo kunye neendlela zokwenza ishishini. Ukukhulisa indawo yokuhlala ngokwakha izikhululo zeenqwelo moya ezinkulu nezinkulu kuya kuba ngumceli mngeni kwimbono yomgaqo-nkqubo woluntu.
Ukujongana nemiceli mngeni kwizikhululo zeenqwelo moya zexesha elizayo, sisebenzisene neBhunga leZikhululo zeZikhululo zeNqwelo moya (ACI) ukwenza inyathelo le-NEXTT. Sisonke sihlola utshintsho olubalulekileyo kwitekhnoloji kunye neenkqubo zokuphucula ukusebenza kakuhle kwamava abathengi bethu xa behamba.
Oku kubandakanya ukuvavanya ukhetho lokuqhubekeka ngaphandle kwesiza; ezinokunciphisa okanye zisuse imigca. Sikwakhangele ekusebenziseni ubukrelekrele bobugcisa kunye neerobhothi ukusebenzisa ngokufanelekileyo indawo kunye nezixhobo. Enye into ebalulekileyo kukuphucula ukwabelana kwedatha phakathi kwabachaphazelekayo.
Zili-XNUMX iiprojekthi ezizezinye eziqhubeka ngoku phantsi kwesambulela se-NEXTT. Uya kuba nethuba lokufunda malunga nabo kamva namhlanje. Ndiyakukhuthaza ukuba ube 'nohambo lwesikhululo seenqwelomoya kwixesha elizayo' kwinyani ebonakalayo kwibhokisi ye-NEXTT kwindawo yomboniso.
Sijonge phambili ekuboneni iPoland ithatha inxaxheba yobunkokeli ekuhambiseni umbono we-NEXTT ngokwakhiwa kwesikhululo seenqwelomoya esitsha saseWarsaw- iSolidarity Transport Hub. Isikhululo senqwelomoya sokuqala saseYurophu kwisithuba seminyaka elishumi. Lithuba elikhulu lokugxila ekusebenziseni imigangatho yetekhnoloji yamashishini ukuhambisa:
Ukuhamba okungenamthungo, okukhuselekileyo, okusebenzayo kunye nokuhamba ngokukodwa kwabahambi
Ukuhamba ngobuchule nangokukhawuleza kwemithwalo
Ukujika kweenqwelomoya okusebenzayo kuxhotyiswa ngoomatshini abazenzekelayo kunye nokutshintshiselana ngedatha phakathi kwabachaphazelekayo.
Sele simisele iqela labachaphazelekayo ukuba linxibelelane neenkokheli zeprojekthi kunye norhulumente ukwenza oku kube yimpumelelo kwaye kuqinisekiswe indlela efanelekileyo yokuziphatha.
Kuya kufuneka sikhumbule ukuba unxibelelwano lomoya lwehlabathi luhanjiswa ebantwini ngabantu. Sifuna abasebenzi abahlukeneyo abanezoqeqesho kunye nezakhono kwilizwe eliqhubela phambili kwidijithali nakwidatha.
Okwangoku, akukho mfihlo ukuba ibhalansi yesini kumanqanaba aphezulu kwindiza ayisiyiyo le nto kufanele ukuba ibe yiyo. Asisayi kuba namandla afunekayo kwikamva ukuba asizibandakanyi ngokupheleleyo ukubanako kwabafazi kubasebenzi kuwo onke amanqanaba.
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, i-IATA iphehlelele i-25by2025 Campaign yokujongana nokungalingani ngokwesini kolu shishino. Yinkqubo yokuzithandela yeenqwelomoya ukuba zizibophelele ekwandiseni ukuthatha inxaxheba kwabasetyhini kwinqanaba eliphezulu ukuya kuthi ga kuma-25% okanye ngama-25% ngowama-2025. Kwaye kufuneka sigcine engqondweni ukuba eyona njongo iphambili kukusizisa kukumelwa okungama-50-50.
IATA ikwathatha inxaxheba. Ukuzibophelela kwethu esikwenzayo kukwenza uluhlu lwezithethi ezahlukeneyo kwiinkomfa zethu. I-ajenda ye-GAPS yalo nyaka ine-25% yabasetyhini abathathe inxaxheba. Siza kwenza ngcono kunyaka olandelayo nakunyaka olandelayo nasemva koko!
Sonke silapha namhlanje ngenxa yokuba sikholelwa kokuhle okwenziwa yindiza. Njengoko benditshilo ngaphambili, ukubhabha yinkululeko. Uluntu esihlala kulo lungcono kwaye lutyebile ngenxa yento eyenziwa lushishino lwethu. Ukukhusela le nkululeko kwizizukulwana ezizayo kufuneka sizibophelele ekwenzeni indiza igcinwe ngokungathandabuzekiyo-esingqongileyo, ezoqoqosho nezentlalo.
Kufuneka silawule ngokukuko impembelelo yethu yokutshintsha kwemozulu
Kufuneka siqinisekise ukuba abakhweli basembindini wenkqubo yethu yokwenza izigqibo
Kufuneka sakhe iziseko zophuhliso ezifanelekileyo nezisebenzayo ezinokumelana neemfuno zexesha elizayo
Kufuneka sidale abasebenzi abalinganayo ngokwesini abaxhotyiswe ngezakhono zexa elizayo
Le ayisiyomisebenzi mincinci. Kodwa siyiqhelile imingeni. Kwaye xa ubuchwephesha bemanyano bumanyene kwinjongo eqhelekileyo besisoloko sihambisa izisombululo ezibalaseleyo.
Iindaba ezingakumbi ze-eTN kwi-IATA cofa apha